Momba anay - Fujian Bailong Lace Manufacture Co., Ltd.
FITIAVANA BAILONG naorina tamin'ny 2003, izay orinasa lamba mifandraika amin'ny Fikarohana sy fikarohana, famokarana ary marketing. Manokana izahay amin'ny dantelina avo lenta ho an'ny akanjo anatiny, atin'akanjo ary akanjo.
Ny milina jacquard solosaina avo lenta sy mahomby ary fitaovana fanenomana mifanentana avy amin'ny Alemanina Karl Mayer dia afaka mamoaka kofehy 100 taonina isam-bolana, ahafahantsika mandray baiko am-peo. Hatramin'izao, mpamorona efa za-draharaha efa namorona maodely maherin'ny 10.000 isa hisafidiananao. Mandritra izany fotoana izany, manatsara hatrany ny kalitao ary mamolavola dantelina vaovao 15 isam-bolana mba hihaonana amin'ny filàna sy ny fironana manova tsena.
Ny orinasa dia manana ekipa mpivarotra matihanina manao raharaham-barotra any ivelany ary namorona mihoatra ny 15 tapitrisa dolara ny sandan'ny fanondranana. Serivisy tsara indrindra miaraka amin'ny vidiny tsara indrindra sy ny fomba tokana misy kalitao avo lenta dia manaparitaka erak'i Eropa, Amerika atsimo, Azia atsimo atsimo ary afrika.
Miorina amin'ny foto-kevitry ny serivisy "Miorina amin'ny fahamendrehana, miompana amin'ny serivisy", i BAILONG LACE dia mino fa "ny fahamarinana dia mahatratra fiaraha-miasa, famirapiratan'ny fiaraha-miasa." Izahay dia manatanteraka tetikady iraisampirenena, mandray ny fomba fitantanana maoderina, manangona talenta amin'ny sehatra rehetra, manangana kolotsaina orinasa. "Miezaha ho tsara indrindra" dia fitsipika mifehy ny fitondran-tena isaky ny mpiasa. BAILONG LACE dia namoaka fanafihana ho lasa orinasa marika manana fahaiza-manao iraisam-pirenena.